Indawo ebuyiselwe ngokufanelekileyo kwiLimerick yezeMbali
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMarketa
Igumbi lokulala elitofotofo elinegumbi elinye kwindlu yokwenyani yee-1840s yaseGeorgia. Embindini weLimerick, isango lokungena kwi-Wild Atlantic Way. Yonwabele eli khaya likumgangatho ophantsi ngomnyango wabucala kunye nokufudumeza ngaphantsi. Pheka isidlo sangokuhlwa ekhitshini elixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye emva koko uphume uyokonwaba kwindawo yembali yaseLimerick. Makube ziigalari, iithiyetha, iimyuziyam, imbali (iNqaba yaseKing John), ezemidlalo (iMunster Rugby) okanye ivenkile, iwini kunye nokutya konke kumnyango wakho. Onstreet yokupaka ngqo ngaphandle.
Ifakwe kwindlu entle yedolophu ebomvu eyakhiwe ngo-1840, eli gumbi liqaqambileyo lineplani evulekileyo yokuhlala kunye negumbi lokutyela, ikhitshi elifakwe ngokupheleleyo, igumbi lokulala eliphindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela. Ipakishwe ngomtsalane, ilungele ishishini okanye ikhefu lesixeko. Ilungele isibini kodwa ihlala ukuya kuthi ga kwezine - ezimbini kwigumbi lokulala elinebhedi enkulu kunye nesibini kwibhedi yesofa kwigumbi lokuhlala.
Sikwindawo entle yaseGeorgia yesixeko saseLimerick. Iigalari, iimyuziyam, iindawo zokutyela eziphumelele amabhaso kunye neekhefi ezininzi, iibhari, ii-pubs ezinkulu kunye neevenkile zonke zikumgama wokuhamba.
Umbuki zindwendwe ngu- Marketa
Sinika iindwendwe zethu ubumfihlo kunye nendawo kodwa siyafumaneka xa kuyimfuneko. Sihlala kwindlu ephezulu ukusuka kwigumbi kwaye siya kukubulisa xa sifika. Ukuba siphumile, siya kukubonelela ngenombolo yebhokisi yokutshixa ukuze ufumane isitshixo sakho kwaye siya kudibana nawe emva kwexesha elingephi emva kokufika kwakho.
Sinika iindwendwe zethu ubumfihlo kunye nendawo kodwa siyafumaneka xa kuyimfuneko. Sihlala kwindlu ephezulu ukusuka kwigumbi kwaye siya kukubulisa xa sifika. Ukuba siphumile, siya…